၂၀၂၀ ဘယ်လ်ဂျီယံမယ် Live လွှင့်စဉ် ချော်လဲပြီး အတွင်းခံကျွတ်ကျ by popolay.com
နှာခေါင်းစည်း ဈေးနှုန်းအဆမတန် တင်ရောင်းသူများအား ဖမ်းဆီးအရေးယူ
မွေးကင်းစ ၁၇ ရက်သမီးလေးတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အလိုလိုပျောက်ကင်း
တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအား ရောင်းဝယ် စားသောက်ခြင်းကို တရုတ် ဥပဒေထုတ် တားမြစ်
ကမ္ဘာကြီးက ပြားကြောင်း သက်သေပြသူ ဒုံးပျံပျက်ကျသေဆုံး
မြန်မာလူငယ်တစ်ဦး ထိုင်းထီပထမဆု ဘတ်(၆)သန်း ကံထူး
အက်စစ်နဲ့ပက်ခံရသူ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအမှု သက်ဆိုင်ရာက အရေးယူမှုမရှိသေး (ရုပ်သံ)
ဇနီးသည် မြစ်ထဲခုန်ချ အဆုံးစီရင်တာကို ဒီအတိုင်းကြည့်နေခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်း (ရုပ်သံ)
ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ရောက်ရှိလာတဲ့ ဝူဟန်က ခရီးသည် (၅) ဦးတွင် ဗိုင်ရပ်စ်ပိုး မတွေ့ရှိရဟုဆို
၂ နှစ်သမီးလေးကို ရေကန်ထဲခေါင်းနှစ် သတ်မိခဲ့သူမိခင် ထောင် ၁၈ နှစ် ကျခံရ
ရေကူးကန်မှာ ရေကူးခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ဟု ပြောဆိုသူ ဝေဖန်ခံနေရ
ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့ မိခင်ကို ဆဲတယ်ထင်ပြီး သားဖြစ်သူဆောင့်ကန်ရာမှ သေဆုံး
AirAsia က လေယာဉ်လက်မှတ် တစ်သန်းကို ယနေ့ အခမဲ့ စပေးနေပြီ
အတွင်းခံမဝတ်ရင် အူကျွံ(အူကျ) စေနိုင်လား..?
ဘီယာတစ်နေ့ တစ်ဗူး မှန်မှန်သောက်ခြင်းက ၉၀ ကျော်ထိ အသက်ရှည်စေနိုင်
ဟော့ပေါ့ အရမ်းကြိုက်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးသတိ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မကူးစက်အောင် ကာကွယ်နေထိုင်ရန် နည်းလမ်းကောင်းများ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံး သူတောင်းစားများ
လက်သည်းတွေဘာကြောင့် ခဏခဏကျိုးနေရတာလဲ..? ကာကွယ်နည်း
တိရိစ္ဆာန်လေးတွေက ပြောပြတဲ့ မိမိရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
၂၀၂၀ မှာ လစာကောင်းကောင်းနဲ့ အလုပ်တစ်ခုရဖို့ဆိုရင်
မကြာခင်မှာ ကလေးနှစ်ယောက်ဖခင်ဖြစ်တော့မယ့် သရုပ်ဆောင်မြင့်မြတ်
ကိုရာနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Mission Impossible7ရုပ်ရှင် ဆက်မရိုက်နိုင်တော့
မေသန်းနုထပ်မံတရားစွဲခံရခြင်းဟာ မတရားခံရတာဖြစ်ကြောင်း ညီမဖြစ်သူမှပြောကြား
ဒါရိုက်တာ Steven Spielberg ရဲ့ သမီးဖြစ်သူ အပြာရုပ်ရှင်လောကထဲ ခြေချတော့မည်ဟုကြေညာ
စန္ဒယားအဟောင်းတစ်လုံးထဲ တူရိယာအမျိုး ၂၀ ထည့်ထားတဲ့ သံစုံတီးဝိုင်းအသေးစား (ရုပ်သံ)
14 Jan 2020 23,011 Views
ပရိသတ်တွေကို တောင်းပန်ပြီးမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ခဲ့တဲ့ “ဆောလီ” (ရုပ်သံ)
နေ့တိုင်းအနိုင်ကျင့်ခံရလို့ သေပါရစေလို့ တောင်းဆိုနေတဲ့ လူပု ကလေးလေး (ရုပ်သံ)
TikTok မှာ တုတ်ထောက်တန်းကျော် အမြင့်ခုန်ပြစဉ် ပြန်အကျမှာ တုတ်စူးဝင်
မီးပွိုင့်မှာ သေနတ်ပြပြီး ပိုက်ဆံလိုက်တောင်းနေသော ကလေးအား ဖမ်းဆီး